घर यूरोपियन फुटबल स्टोरीहरू क्रोएसियाई फुटबल खेलाडीहरू इवान रुकती बचपन कथा प्लस अनर्थ को जीवनी तथ्य
एलबी पूर्ण फुटबल प्रतिभा को प्रस्तुत गर्दछ जसले सर्वोत्तम उपनाम द्वारा जान्छ; 'Raketa'। हाम्रो इवान राकीitic बालबालिकाको कथा प्लस जीवनी तथ्यहरूले तपाईंलाई बचाउनु पर्ने घटनाको पूर्ण खाताको मितिको अन्तराल सम्म पुग्छ। विश्लेषणमा प्रसिद्धि, सम्बन्ध जीवन, पारिवारिक जीवन र उनको बारे धेरै थोरै ज्ञात तथ्याङ्कहरू भन्दा पहिले आफ्नो जीवन कथा समावेश गर्दछ।
हो, सबैले आफ्नो क्षमताको बारेमा चिन्ता छ तर कम से कम इवान रुकिक जीवनीको बारेमा सोचेको छ। अब थप adieu बिना, सुरु गरौं।
इवान रुकती बचपन कथा प्लस अनर्थ बाइविल तथ्य -बाल्यकाल
इवान रकिती मार्च 10 को 1988th दिन, स्विट्जरल्याण्ड माहलिन मा जन्मिएको थियो। उनी आफ्नो आमा, काटा रकितीकी र बुबा, लुका रकीतीमा जन्मिए। दुवै आमाबाबु मूल हो क्रोएशन् हुन्।
युद्ध भन्दा पहिले युगोस्लाभियामा बढ्दै गएको तनावको कारण, तिनका आमाबाबुले क्रोएशियाबाट स्विट्जरल्याण्डलाई आफ्नो जीवन बचाउन र इवान र तिनका भाइको जन्म पनि साक्षी लिए। यो परिणामस्वरूप कम इवानले स्विट्जरल्याण्डमा आफ्नो बचपन खर्च गरे जहाँ उनको बुबाले मुहलिनमा निर्माण स्थलमा नौकरी पाए।
आदर्श रूपमा, उनी क्याथोलिक विश्वासमा उठाइयो, फुटबल र क्रोएशियन मनोभाव दुवैमा हुर्के।
तिनका बुबा र वृद्ध भाइ फुटबलर थिए। यस्तो पृष्ठभूमिको साथ यो आश्चर्यचकित भएन जब रकितीकीले त्यस्ता आशंकाहरुमा बलियो चासो लिएका थिए, भले ही उनले आफ्नो प्राथमिक स्कूल अध्ययन पूरा गरे। त्यसो गर्न पछि, तिनले आफ्नो परिवारको प्रोत्साहन संग, आफ्नो खेलकुद कैरियरमा ध्यान केन्द्रित गर्न थाले।
आफ्नो आमाबाबुको सहयोगको बावजुद लिटिल इवानले स्वतन्त्र निर्णयलाई महत्त्वपूर्ण बनाएका थिए।
काटा रच्छिटिको शब्दमा उनको आमाले एक पटक भने ... "मलाई सम्झँदा इवानले स्कूल शुरु गरे। उनले मलाई सोधे: 'आमा, मलाई कति वर्ष स्कूल जानु पर्छ? ' मैले उनलाई9वर्ष भनेँ किनभने यो स्विट्जरल्याण्डमा अनिवार्य स्कूल प्रणालीको लम्बाइ थियो। उहाँले मलाई भन्नुभयो: 'ठीक छ, म लामो समयसम्म स्कूल जान्छु, तर एक दिन लामो छैन।' यो अय्यूबकी आमाको मातृभाषाका शब्दहरू थिए। आफ्नो दिमागमा गहिराइ, उहाँले साँच्चै ती नौ वर्ष भन्दा लामो समय स्कूलमा जान चाहनुहुन्न। साढे वर्षसम्म, इवान पछि बाहिर गयो र निर्माणको लागि एक टेक्निकल स्कूलमा नामांकन गरियो जसको नामले9वर्षको नाममा शिक्षाको आधारमा आधा कम भयो।
यसको कारणले इवानले गम्भीरतापूर्वक फुटबल खेल्ने गरेको थियो। उहाँले एक पटक आफ्ना आमाबाबुलाई भन्नुभयो कि यो प्रशिक्षित, अध्ययन र स्कूल जान्छ। यसले उनको पिताले उनलाई फुटबल वा शिक्षा चयन गर्ने निर्णय गर्यो। आश्चर्यजनक कुरा, इवानले अर्को दिन आफ्नो निर्णय गरे। त्यस दिन, उनले आफ्ना पुस्तकहरू फर्काए र तिनीहरूलाई बताए कि उनी आफ्नो सम्पूर्ण जीवन फुटबलमा समर्पण गर्न चाहन्थे। कस्तो साहसी हृदय
त्यस समयमा उनको कुनै व्यावसायिक अनुबंध छैन तर बासेलमा आशा र विश्वास थियो उहाँलाई। वास्तवमा, फुटबलमा इवान बहादुर बनाइयो। यो स्कूल बाहिर छोड्ने विश्वास थियो र फुटबलमा उनको सम्पूर्ण जीवन समर्पणले उसलाई कडा बनायो। बाकि, जस्तै तिनीहरू भन्छन्, अहिले इतिहास हो।
इवान रुकती बचपन कथा प्लस अनर्थ बाइविल तथ्य -सम्बन्ध जीवन
सत्यलाई बोलाइनु पर्छ। इवान रकीती फुटबलमा सबैभन्दा डरलाग्दो प्रेम कथाको बारेमा जानिन्छ। कथा यो जस्तो हुन्छ ...
इवान र तिनको भाइ, डेजन उनको बारेमा सेभिलाको लागि साइन इन गर्न उत्साहित भएको थियो ताकि तिनीहरूले त्यो रात सुवेली शहरमा आइपुगेको थिएनन्।
अर्को दिन, अपराधको दुबै भाइहरूले सम्पूर्ण दिन बिताउन र रात पास गर्न स्पेनिस लाउन्ज सह बार भ्रमण गर्न निर्णय गरे। तिनीहरूले आफैंको लागि कफी आदेश दिए। जस्तो कि यो हुनेछ, कपडाले क्षणलाई बिस्तार गर्यो, लाउन्जमा युवा सुन्दर वेट्रेसले इवानको केक सेवा गरे।
इवानले सुन्दर वेट्रेसको विरोध गरेन जसको नाम उनले रुक्वेल मौरीको रूपमा उनको नाम पुष्टि गरे। उनले प्रायः स्पेनमा आउनु भएको प्राथमिक कारण बिर्सनुभयो; 'सेलिलासँग कुराकानी गर्न एउटा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न'.
यो जनवरी 27 भयो, स्थानान्तरण बजार बन्द चार दिनअघि। यस अवधिको समयमा,
अर्को टोली तिनलाई बोलाउन र उनको लागि एक निजी विमान राख्ने तयारी गरी उनीहरूको लागि साइन इन गर्न तयार थिए। इण्टरनेटमा एक महिला थिइन्, इवानले आफ्नो भाइलाई भने ..."होइन, मैले मेरो वचन सेलिला राष्ट्रपतिलाई दिएको छु; म यो सम्झौता भोलि साइन इन गर्न जाँदैछु ... बाहेक, म त्यो सुन्दर वेट्रेस संग प्रेम मा गिर गयो जो मेरो ठाँउ यहाँ सीमेंट गर्दछ "।
तुरुन्तै उनको स्थानान्तरण समाप्ति पछि, इवान पहिलो नजर मा आफ्नो प्रेम को लागी चलाए। उनले पहिलो पटक निरन्तरतामा कि लाउन्जमा आएर एक रणनीति सुरु गरे। दोस्रो प्रेमले आफ्नो कामलाई रोक्न र उनको फुटबलको चमकमा साझेदारी गर्न उत्प्रेरित गरेर। उनले स्वीकार गरेपछि उनले तिनलाई पोलिश गरे। अय्यूब डेलिब्लिङ गरेपछि महिना पछि पछि उनी आफ्नो प्रेमिकाको लागि निरन्तर अनुरोध स्वीकार गरे।
इवानले उनको विवाह गर्न निर्णय गर्नु अघि दुई वर्षको लागि उनको रकलको दर्जा दिए। आफ्नो जीवनमा सबैभन्दा सुन्दर दिन अप्रिल 2013 मा भयो।
इवान रकीती विवाहको फोटो
उनीहरूका छोरी अल्टिया 2013 मा जन्मिए। Althea आमाबाबु उसलाई तैरने को लागी प्यार गर्दछ। तिनीहरू सबैको कारण डरलाग्दो देखे, जबकि तल फोटोमा पानीमा।
इवान रैटिक र परिवारले हेर्दा पानीमा डराउँछ
मई 2016 मा, उनको दोस्रो छोरी, आदारा, जन्मिएको थियो। इवानले आदराको जन्म मनाउन तल फोटो खिचे।
इवान रुकिक परिवार फोटो
भारी परिवार सम्बन्ध निर्माण गर्न बोलीमा, इवानले परिवारलाई छुट्टै छुट्टै यात्रा गर्न आवश्यक छ। उहाँका परिवार मात्र होइन महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यो सबै चीज हो।
इवानले आफ्नो परिवार छुट्टीको लागि लिन्छन्
रिचेल हुनु अघि र रक्लेलसँग परिवार सुरू गर्नु भयो, इवानले टाटजाना बैटिनिक गरे।
इवान रिकीको पूर्व प्रेमिका
इवान रुकती बचपन कथा प्लस अनर्थ बाइविल तथ्य -पारिवारिक जीवन
इवान एकपटक एक उच्च-मध्य-कक्षाको पारिवारिक पृष्ठभूमिको फुटबल परिवारबाट आए। तिनको पारिवारिक अवस्थाले सुपर अमीर ऊपरी-वर्गलाई बदलिदिएको छ जस्तै कि उनको लागि फुटबल लगानी। अब यहाँ इवान रकीती परिवारको बारेमा संक्षिप्त छ।
फेथर: इवान रुकिटको पिता, लूका, तपाईं फुटबलर हुनुभयो यो यसलाई आफ्नो क्यारियरको शिखरमा बनाउँदैन। अहिले उनी आफ्नो छोराको क्या क्यारियरको प्रबन्ध गर्दछ।
निरन्तर चिकित्सा समस्याहरूको कारण लूका रैटिकले प्रारम्भिक फुटबल सेवानिवृत्तिमा गए। त्यतिन्जेल, उनीहरूले पनि नागरिकता पाउने भए पनि स्विस पेंशन पाउँदैनन्।
लुका रकीतले गर्व गरे कि उनी आफ्नो छोराको सफलताको लागि सबै भन्दा अधिक जिम्मेदार छन्। उनी इवानको क्यारियर निर्णयको सन्दर्भमा अन्तिम अनुमोदन दिन्छन् जसले प्रबन्धकको प्रबन्धकको रूपमा सेवा गर्दछ। हालै, उनी स्विस प्राधिकरणको साथ युद्धमा थिए र स्विट्जरल्याण्डमा आफ्नो निर्माण कार्यशालामा ओभरटेक्स ब्रेक गर्न थालेको थियो।
मातृभाषा: काटा रकितीकी इवानको आमा हो। त्यो बोस्निया र हेर्जेगोविनाबाट हो र स्विट्जरल्याण्ड वा क्रोएशियाबाट होइन जहाँ उनको पति आउँछ। त्यो एक गृहस्थकर्ता हो जसले आफ्नो परिवारको हेरचाह र उनको छोराको क्यारियरलाई समर्थन गर्नुको लागी अरु केहि छैन।
इवान रकीतीकी आमा-काटा रकितीकी
भाइरस: इवान र तिनका जेठा भाइले डज नाउँ गरे। डेजन पनि फुटबल खेलाडी थिए तर उनले दुई पटक आफ्नो दायाँ एड़ीमा हड्डी तोडेपछि छोडेर छोडें। उहाँ अहिले कहिल्यै स्विट्जरल्याण्डमा व्यापार दायित्वहरूसँग व्यस्त हुनुहुन्छ।
इवान रकिती र भाइ, डीजन - अंतर स्पट गर्नुहोस्
इवानमा निकोल रकीटिक नामको सुन्दर बहिनी छ।
इवान रुकिक र बहिनी- निको रकीती।
इवान रुकती बचपन कथा प्लस अनर्थ बाइविल तथ्य -स्विट्जरल्याण्डमा आतंक
रकितीको परिवार एक पटक स्विट्जरल्याण्डमा आतंकको सामना गर्नु भयो। यो भयो जब तिनले स्विट्जरल्याण्ड राष्ट्रिय टोली छोडे र क्रोएशन् राष्ट्रिय फुटबल टोलीको अन्तिम सदस्य दर्ता गरे।
उनको निर्णय स्विस स्विस को क्रोध को आकर्षित गर्न को लागी उनको क्रोएशिया को खेल को फैसला संग। वास्तवमा, उनको परिवार क्रोएशिया शर्ट पहनेपछि फोन कल र महिनाहरूको लागि इमेलहरू द्वारा धम्की दिइयो।
इवान रुकती बचपन कथा प्लस अनर्थ बाइविल तथ्य -उहाँले किन छोड्नुभयो
सायद तपाईको दिमागमा के सोच्नु प्रश्न हो? इवान रुकिटले स्विट्जरल्याण्ड राष्ट्रिय टोली किन छोडे?
Asides नस्लवाद, इवान एक पल्ट कि उनको उनको नागरिकता को अस्वीकार गर्न को लागि एक अर्ध महिना पहिले पत्ता लाग्यो, उनको पिता लूका उनको स्विस नागरिकता आवेदन अस्वीकार गरेको थियो।
लुका रकीतीले स्विस नागरिकताको अनुरोध गरे ताकि उनको सानो निर्माण कार्यशालाले कर ब्रेक पाउनेछ। Rakitic परिवारले यो जानकारी जनतालाई कसरी लियो भनेर थाहा छैन। परिस्थितिलाई बिग्राउन, राजनीतिको कारण नागरिकताको लागि लुका रकीको अनुरोध अस्वीकार गरियो।
त्यसो भए, स्विस राष्ट्रिय टोली छोड्ने निर्णयले स्विट्जरल्याण्ड फुटबल प्राधिकरण र ठूलो देशमा राजनीतिक वातावरणको परिणामस्वरूप आएको थियो। इवान एक पटक एक राजनीतिक घोटालाको केन्द्रमा थिए।
आफ्नो निर्णयलाई जोड दिँदै, इवानले भन्यो ..."मेरो दिमाग बनाउन अघि, मेरो परिवार युगोस्लाभियामा फर्किने भनिएको थियो; कि स्विस हामी सबैलाई यूगोस्लाभियन हुन विचार गर्दछौं; त्यो हामी सबै नै हो। "
उसले छोड्नको लागि आफ्नो कारण ठान्थ्यो। यद्यपि यो स्विस सरकार थियो जसले पहिलो परिवारमा आफ्नो पारिवारिक शरण दिए। इवानले उनको पछाडि सबै खतराहरू त्यागेका छन्। उहाँ अहिले आफ्नो फुटबलमा केन्द्रित हुनुहुन्छ र कुनै अरूको बारेमा सोच्ने समय छैन।
इवान रुकती बचपन कथा प्लस अनर्थ बाइविल तथ्य -क्यारियर सारांश
र उनले स्विस स्विट्जरल्याण्डका लागि उनको सबै बचपन खेल्थे र उनीहरूको यूएक्सएनएमएमएक्स प्रतिनिधित्व गरे।
Rakitić मा आफ्नो पेशेवर क्यारियर शुरू गर्यो बेसल र साइन इन गर्नु अघि दुई ऋतुहरूसँग बिताए Schalke 04। Bundesliga मा तीन-साँहि ऋतुहरू खर्च गरेपछि उनी साइन इन गरिएको थियो sevilla जनवरी 2011 मा। दुई वर्ष पछि, राकिटिकीलाई क्लबको रूपमा पुष्टि गरियो कप्तान र टोलीलाई कप्तान गर्यो UEFA Europa लीग विजयी
जुन 2014 मा, बार्सिलोना र सेलिला रिक्तीकी को हस्तांतरण मा एक समझौते सम्म पुग्यो। 2014-2015 सीजन इवानको लागि एक विशेष थियो। उनले खरगोश गरे र घरेलू लीगमा अन्त र युरोपियन प्रतियोगिता लीग को सर्वश्रेष्ठ 11 खेलाडीहरु को सबै सीजन को चयन। बाकि, जस्तै तिनीहरू भन्छन्, अब इतिहास हो।
इवान राकीitic बालबालिका स्टोरी प्लस अनगिन्ड जीवनी तथ्यहरू पढ्नका लागि धन्यवाद। हामी सटीकता र निष्पक्षताको लागि प्रयास गर्छौं। यदि तपाइँ केहि कुरा देख्नुहुन्छ जुन यस लेखमा सही देखिएन, कृपया तपाईंको टिप्पणी वा ठाँउ दिनुहोस् हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस!